I-SAT Amanqaku Ukuthelekiswa kweYunivesithi yaseCalifornia
Itheyibhile ye-Middle 50 izikolo zeMathematika, ukuHlanganiswa nokuFunda nokuBhala
Inkqubo yeYunivesithi yaseCalifornia ibandakanya ezinye zeeyunivesithi ezikarhulumente ezilungileyo kwilizwe. Imilinganiselo ye-Admissions iyahluka ngokubanzi, kwaye itheyibhile engezansi ichaza phakathi kwama-50% ama-SAT amanqaku abafundi ababhaliswe kwii-10 zase-University of California. Ukuba amanqaku akho angena ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezigaba ezidweliswe ngezantsi, ujoliswe ekujoliswe kuzo kwezi zikolo.
Ukuthelekisa izikolo ze-SAT zokwamkelwa kwiiYunivesithi zaseCalifornia
IYunivesithi yaseCalifornia yeSAT Inkcazelo Ukuthelekiswa (phakathi kwama-50%)
Berkeley 620 750 650 790 ubone igrafu
Davis 510 630 500 700 ubone igrafu
Irvine 490 620 570 710 ubone igrafu
ilos Angeles 570 710 590 760 ubone igrafu
Merced 420 520 450 550 ubone igrafu
Riverside 460 580 480 610 ubone igrafu
ESan Diego 560 680 610 770 ubone igrafu
Santa Barbara 550 660 570 730 ubone igrafu
Santa Cruz 520 620 540 660 ubone igrafu
Imigangatho yokwamkelwa ye-UC Merced iyafana neyunivesithi yase- California State , kanti i-Berkeley ne-UCLA ziphakathi kweeyunivesithi zikarhulumente ezikhethiweyo kwilizwe. Qaphela ukuba kukho iikholeji ezizimeleyo kunye neeyunivesithi ezikhethileyo kakhulu, kwaye akukho ziko loluntu lenze idilesi yam yeekholeji ezingama-20 zelizwe.
Izikolo ze-SAT Ziyodwa enye yeSicelo
Qaphela ukuba izikolo ze-SAT ziyingxenye enye yesicelo, kwaye irekodi ephakamileyo ephakamileyo yesikolo ithwala ubunzima obuninzi. Abantu beYunivesithi yaseCalifornia abantu abamkeleyo baya kufuna ukubona ukuba wenze kakuhle kwikharityhulam yokulungiselela ikharityhulam . Impumelelo kwi-Placement Advanced, i-Baccalaureate yamazwe ngamazwe, i-Honours kunye neeklasi zokubhalisa zombini zinokudlala indima ebalulekileyo kwinkqubo yokungena.
Iifunivesithi zaseYunivesithi yaseCalifornia (ngokungafani neyunivesithi yaseCal State) zenze i- admissions ephelele , oku kuthetha ukuba bajonge ngaphezu kwamanqaku kunye ne-SAT / ACT amanqaku.
Izakhono ezibhaliweyo zokubhala, imvelaphi yezemfundo eyahlukeneyo, umsebenzi okanye amavavolontiya amava, kunye nemisebenzi yemisebenzi yecandelo elongezelelweyo yiyo yonke into eyenziwa yi-ofisi yokungeniswa kweofisi yee-ofisi. Yaye ukhumbule ukuba abafundi abangama-25% ababhalisile babe nama-SAT amanqaku angaphantsi kweemigangatho echazwe apha-ukuba amanqaku akho angaphantsi kweemigangatho ebonisiwe, usenalo ithuba lokuvunyelwa, ngaphandle kokuba zonke izicelo zakho zomelele.
Ukubona okubonakalayo kweli qhosha, nqakraza kwi "khangela igrafu" iqhagamshela ngakwesokudla komqolo ngamnye kwitafile ngasentla. Kukho, uya kufumana igrafu ebonisa indlela abanye abafaki-sicelo abaye bafezeka ngayo kwisikolo ngasinye-nokuba ngaba bamkelwe, bafundwa, okanye bafunyanwe, kwaye zeziphi izikolo zabo kunye nama-SAT / ACT amanqaku. Unokufumana abafundi abathile abanamanani aphezulu kunye namabanga awazange avunyelwe esikolweni, kodwa abafundi abathile abanamabanga aphantsi bavunyelwe. Oku kubonisa ingcamango yokungeniswa kwamanye amazwe-ukuba izikolo ze-SAT ziyingxenye enye yenkqubo yesicelo. Ietalente ezikhethekileyo kwiimidlalo okanye kumculo, ibali eliyinyanzelayo, kunye nezinye izinto ezisesekondari zingancedisa ukwenza izikolo ze-SAT ezingaphantsi kwezinto ezifanelekileyo. Okokuthi, amathuba okuvunyelwa ukuba avunyelwe kuya kuba ngcono xa izikolo zakho zokuvavanya eziqhelekileyo ziphezu kwiphepha eliphezulu lemigangatho edweliswe kwitheyibhile.
Ukuze ubone iprofayili epheleleyo yekholejini nganye, nqakraza amagama kwitafile ngasentla. Kukho, unokufumana ulwazi oluthe xaxa malunga nokumkelwa, ukubhaliswa, izikhundla ezidumileyo kunye noxanduva lwemali.
Iifayile ezininzi ze-SAT:
IYunivesithi yaseCalifornia, ngokubanzi, ikhethe ngakumbi kuneenkqubo zeCal State. Khangela le ngcaciso ye- SAT yamanqaku e-Cal State ukuze ufumane ulwazi oluninzi.
Ukubona indlela iYunivesithi yaseCalifornia ithelekisa ngayo nezinye izikolo eziphezulu zaseCalifornia, khangela ukuba le ngqangi ye-SAT ifanisa iikholeji zase-California kunye neeyunivesithi . Uza kubona ukuba iStanford, iHarvey Mudd, iCalTech, neKholeji yasePomona zikhethileyo ngaphezu kwezikolo ze-UC.
I-UCLA, iBerkeley, kunye ne-UCSD ziphakathi kweeyunivesithi zikarhulumente ezikhethileyo kwilizwe njengoko unokubona kule ngqungquthela ye- SAT yamanani e-universities aphezulu e-United States.
Ngaba amaSulumane angenza iimithandazo ezingekho phantsi kwexesha elizayo?
Iingqungquthela zeBuddhism zoBushushu
Indlela yokumisela i-Sailboat
9 Amanyathelo kwisiCwangciso sokuFunda seBanga lokuQala lokuThetha ixesha